9 Features YouTube weyn oo ku Waayey
YouTube, si ay u ilaaliyaan oo ay kaalinta hoggaamineed ee video wadaago Misbaax ku, had iyo jeer ka yar tahay horumar. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, qaababka cusub u soo galeen iyagoo leh qaababka kale baaba ka adduunka gabi ahaanba. Weli ma xusuusan gooldhalinta YouTube? Ha seegin in aad ciyaarta Mas in aad ciyaari karo halka video waxaa loading ah? Waxaan ku liis-9 muuqaalada YouTube gaar ah oo mudan in aad fiiro labaad ee qodobkan. Waxaad aan iyaga mar kale u isticmaali karto, laakiin waxa aad ka arki kartaa waxa aad ku seegay oo halkan ku xusto karo.
1. gooldhalinta YouTube
Gooldhalinta YouTube loo isticmaalo in ay meel fiican u hubi ee YouTube videos ugu daawan, ugu jeclaa ama xitaa ugu wada hadleen. Waa maxay dheeraad ah, waxaad sidoo kale ka arki kartaa waxa loo jecel yahay ku dhex jira qaybta gaar ah.
Waxaad ka heli kartaa helitaanka gooldhalinta YouTube ka url soo socda ee la soo dhaafay, www.youtube.com/charts, laakiin hadda URL waxaa lagu wareejiyey channel la odhan jiray Popular on YouTube, taas oo soo bandhigay qaar ka mid ah videos caan ah oo leh faahfaahin yar. Qofna ma yaqaanno sababta ay tani u feature waaqiciga ah waxaa la joojiyey iyo dadka isticmaala qaar ka mid ah xitaa ka cabato arrintan ku saabsan ka qaybgalka shirarka.
Haddii aad run ahaantii argo arki YouTube ugu daawan ama kuwa kale, waxaad eegi kartaa boggan halkii, kaas oo si degree qaar ka mid ah idiin qalbi qaboojin doonaa.
2. YouTube Mas Game
YouTube ciyaarta Mas waxa keeni kara marka aad riixdid fallaadhihii ilaa iyo bidix aad keyboard isku mar. Waa quruxsan weyn oo ay ciyaar ku leeyihiin in la dilo markii ugu markii video la loading. Kulankaan ayaa u muuqday in 2010 oo laakiin ka shaqeeya 2013 markii video ciyaaryahan YouTube lahaa update kale joojiyay.
Qaar badan oo idinka mid ah oo laga yaabaa inuu seego kulanka Mas this. Nasiib wanaag, in aad halkii ciyaari karo kulanka kale - Missle Command, oo laga heli karo marka aad ku qor 1980 si toos ah markii daawashada hal YouTube video laakiin ma playlist ah.
Doonayaa inaan gadaal ugu soo fadhiiso sariirtiisii, oo wuxuu ku raaxaysan YouTube on your TV weyn? YouTube Leanback (www.youtube.com/leanback waa waxa aad u baahan tahay. Waxa si toos ah ciyaari kara video tayo sare leh oo shaashad buuxda. Laakiin waxa aan la heli karin hadda. Halkii, waxaad tagi kartaa YouTube TV in ay ku raaxaystaan ​​videos YouTube.
YouTube XL ayaa sidoo kale loogu tala galay si fiican waayo-aragnimo TV, taas oo ahayd diyaar u ah telefishinada iyo sidoo kale PS3 Wii ama Sony. Waxaa haboon tirada badan oo aad TV galay iyo sidoo kale no comments ama alaab kale oo aan muhiim ahayn. Laakiin waxaa la dhigay si loo dhammeeyey bishii June, 2013. URL asalka ah ee YouTube XL, www.youtube.com/xl, aan shaqaynayn. Laakiin hadda waxaad u tagi kartaa si www.youtube.com/tv u cajiib ah waayo-aragnimo TV.
YouTube Live jeeday in lagu sameeyo warbaahinta live heli karaa YouTube iyo horeysay kasoo muuqday xiddigaha caanka ah sida heesaa Will.i.Am iyo fanaanada Katy Perry. Laakiin www.youtube.com/live URL ay iska daayeen inay ka shaqeeyaan 2011 oo dhan videos la saaro.
Waxaad loo isticmaalaa in lagu ogaado inta waqti ku qaatay in ay ku shuban video YouTube ku xiran internetka aad dhex YouTube MySpeed ​​(www.youtube.com/my_speed) iyo waxa kale oo aad is barbar yaabaa xawaaraha la xawaaraha isku celceliska ee magaalada, gobolka ama dunidu . Laakiin hadda, waxa aan ka shaqeeya oo dhan.
7. YouTube Mawduucyada
Haddii aadan heli karin YouTube videos weyn si aad u daawato, waxaad aadi kartaa Mowduucyada YouTube (www.youtube.com/topics) si aad uga hesho. Great videos yihiin curated galay playlists hoos mawduucyo kala duwan, sida qoob ka ciyaarka iyo kuwa kale. Nasiib darro, tani waxay feature weyn iska daayeen inay weligood u shaqeeyaan.
Iyadoo YouTube Moodwall , waxaad daawan kartaa waxa aad dareensan tahay, in aad ku faraxsan tahay, ama buluug ah, waxaad ka heli doontaa mid ka mid kugu haboon. Nixi kaliya waxaa laga yaabaa in ay tahay halka ay u lahayn in ay wax ka badan ka heli kala soocidda this.
9. YouTube xawli
Marka aad ka raadin xawli on YouTube, oo waxaa jiri doona xawli webpage ku saabsan. Laakiinse haatan, Sixirbaa kani aan jirin oo dhan.
Top 50 Youtube Injiil
Sida loo sameeyo cajiib Photo Muqaal ah ee YouTube
> Resource > YouTube > 9 Gaarka ah YouTube Features in mar dambe ma aad heli karaa